Filtrer les éléments par date : samedi, 19 octobre 2019
samedi, 19 octobre 2019 09:26
Fitsarana: Naiditra am-ponja vonjimaika ao Antanimora i Paul Razanakolona, Ben’ny tanànan’Antsirabe
Niakatra Fitsarana omaly 18 oktobra 2019 tao amin’ny Pôle Anti-Corruption (PAC) ny raharaha fanodinkodinana volam-bahoaka tao amin’ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe, mahavoarohirohy ny Ben’ny tanàna Paul Razanakolona sy tompon'andraikitra hafa ao amin’ity Kaominina renivohitr’i Vakinankaratra ity.
Vola maherin’ny 2,435 lavitrisa Ariary no tsy mazava ny nitantanany azy. Miampy ny fampiasana tapakila tsy ara-dalàna ho fitangosana haba-tsena sy asa tsy hita fototra ao amin’ny Kaominina, nefa namoaham-bola.
Nivoaka ny didy savaranonando, mitazona am-ponja vonjimaika ny Ben’ny tanànan’Antsirabe Paul Razanakolona, sy ny lefiny voalohany. Omaly hariva, dia nalefa avy hatrany ao amin’ny fonjan’Antanimora izy ireo.
samedi, 19 octobre 2019 09:24
Pety Rakotoniaina: Nivoaka ny fonja rehefa notazomina herintaona tao Antanimora
Ny alakamisy 17 oktobra 2019 i Pety Rakotoniaina no nivoaka ny fonjan’Antanimora nitazomana azy. Fananganana fanjakana anaty fanjakana no anisany vesatra niampangana an’ity filoha nasionalin’ny antoko Tambatra ity, sady isan’ny mpitarika ny Hetsika ho an’ny Fanorenana Ifotony (HFI).